घर खर्च धान्न नसक्दा ९ बर्षिया छाेरी पार्वानालाई ५५ वर्षीय कुर्वानलाइ बेचिदिए ! – Online Khabar 24
घर खर्च धान्न नसक्दा ९ बर्षिया छाेरी पार्वानालाई ५५ वर्षीय कुर्वानलाइ बेचिदिए !
काठमाडौं – ता’लिवान शासित अफ’गानिस्तान आर्थिक सं’कटमा फस्दै जाँदा मुलुकका विभिन्न भागमा प्र तिब न्धित प्र थाले पुनः टाउको उठाउन लागेको छ।
परिवारका लागि खर्च जुटाउने नाममा विवाहका लागि बालिका बे’च्ने प्र’था फेरि सुरु भएको पाइएको छ ।
पछिल्लो महिनामा गरिबी र भोकम’रीसँग जुधिरहेका अफगान परिवारले जीवन धान्नका लागि पैसा जुटाउन विवाहको नाममा कलिला बालिका बेच्न बा’ध्य भएको जनाएका छन्।
यस्तै हृ’दयवि’दारक कथा छ-नौ वर्षीया पार्वाना मलिकको। उनलाई परिवारले गत महिना ५५ वर्षीय कुर्वान भन्ने व्यक्तिलाई बे’च्यो। उनको परिवार द्व’न्द्व’ले ज’र्ज’र बा’द्घिस प्रान्तमा रहेको आन्तरिक विस्था’पित व्यक्तिका लागि बनाइएको शिविरमा बस्दै आएको छ।
ता’लिवानले सत्ता क’ब्जा गरेपछि रोजगारी गुमेकाले उनको आठ जनाको परिवारलाई छाक टा’र्न धौधौ छ। अमेरिकालगायत पश्चिमा मुलुकले अफगानिस्तान छाडेपछि त्यहाँ विदेशी सहायता पनि ठप्प भएको छ।
पार्वानाका बुबा अब्दुल मलिकले आर्थिक सं’कटले गर्दा दुई महिनाअघि नै १२ वर्षीया छोरी बेचेको खुलासा गरिसकेका छन्। अहिले उनी परिवारको छाक टार्न अर्की छोरी बेच्न बा’ध्य छन्। यो निर्णयले आफूलाई दुःखी, दो’षी, ल’ज्जा’स्पद र चि’न्तित बनाएको उनको भनाइ छ।
त्यसो त पार्वानाको पढ्ने रहर छ। उनी पढेर पछि शिक्षक बन्न चाहन्छिन्। तर, परिवारको विकराल आर्थिक अवस्थाले गर्दा उनका लागि पढाइको ढो’का बन्द भएको छ। हुन लागेको विवाहको बारेमा कुरा गर्दा पार्वाना भ’यभि’त हुने गर्छिन्। ‘त्यो ‘बुढो मान्छे’ सम्झिनेबित्तिकै मलाई ड’र लाग्छ, उसले मलाई कु’ट्ने’छ, ज’ब’र्ज’स्ती मलाई उसको घरको काममा लगाउनेछ,’ उनले भनेकी छन्।
५५ वर्षीय कुर्वान भन्ने व्यक्ति पार्वानाको घरमा आएर दुई लाख अ’फगानी एएफएन ( दुई हजार दुई सय अमेरिकी डलर) भुक्तानी गर्‍यो, त्यो पनि भेडा, जमिन र केही नगदका रूपमा। पर्वानाका बुबालाई रकम भुक्तानी गरिसकेपछि कुर्वानले कलिलो उमेरकी पार्वानालाई लिएर गए ।
अब्दुल मलिकले छोरीको नयाँ मालिकलाई भ’क्का’निँदै भने, ‘यो तिम्रो बेहुली हो, राम्रोसँग यिनको हेरचाह गर्नू, यिनलाई न’पि’ट्नू है।’ रोएको अब्दुललाई सम्झाउँदै कुर्वानले भने, ‘ पक्कै पार्वानालाई माया गर्नेछु अनि परिवारको सदस्यका रूपमा व्यवहार गर्नेछु।’
‘यदि बालिकाहरु स्कुलमा भर्ना भएका छन् भने परिवारले उनीहरुको भविष्यका लागि लगानी गर्छन्,’ ह्यु’मन राइट्स वाचका हिथर बारले भने, ‘ बालिकाहरूलाई शिक्षाबाट वञ्चित गराउनेबित्तिकै उनीहरू यो कु’प्रथा’को सि’का’र भएर बेचिइन्छन्।’ यो खबर साभार गरियको हो ।
Posted in बिदेश, समाज
Prevछुट्टीमा घर आउने तयारीमा रहेका ३१ वर्षीय पृथ्वी बुढामगरको कतारमा सडक दु’र्घट’नामा मृ’त्यु !
nextधान बारीमा देवरसँग भेटिएकी भाउजू श्रीमानसँग मिडियामा आइन् ,श्रीमानले डि भोर्स माग्दा यसो भनिन् (भिडियो हेर्नुस्)